Global Voices teny Malagasy » Tantara Velon’ny Fiteny Manampy Amin’ny Famoronana Sary Maroloko Maneho ny Fahasamihafàn’ny Fiteny Any Aostralia · Global Voices teny Malagasy » Print
Tantara Velon'ny Fiteny Manampy Amin'ny Famoronana Sary Maroloko Maneho ny Fahasamihafàn'ny Fiteny Any Aostralia
Voadika ny 01 Febroary 2017 2:24 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Arimalala
Pkantsarin'ny sarintanin'i Gambay
Inona no fomba tsara indrindra mba hijerena ny hamaroan”ny fomba fitenin'ny teratany ao Aostralia sy ny mponin'ny Nosy ao amin'ny helodranon'i Torrès raha tsy amin'ny sarintany amin'ny aterineto?
“Gambay,” izay midika hoe “miaraka” amin'ny teny Butchulla  any Hervey Bay, faritra any Qeensland, dia loharano maroloko anaty sarintany  izay manome vaovao momba ireo fiteny teratany maherin'ny 780 ao amin'ny firenena. Mampiseho faritra iray manana fiteny samy hafa ny teboka tsirairay eo amin'ny sarintany, ary ireo teboka mampiseho loko mitovy dia manondro ireo teny izay mety hanana toetra iombonana. 20 monja eo ho eo amin'ireo teny ireo no mba ampiasain'ireo mpiteny tsy miambakavaka amin'ny fiainana andavanandro, ka ny fahafahana manorina rohy eo amin'ireo fiteny mitovy dia tetika manana ny lanjany mba hametrahana fifanohanana.
Pikantsarin'ireo Tantara Velon'ny Fiteny ao amin'ny sarintany Gambay
Nanamboatra fiarahamiasa tamin'ny Mpanolotsain'ny Komitin'ireo fitenin'ny teratany ao Queensland  ny First Languages Australia  – Teny Aostraliana Voalohany, izay nizara ny teknolojia novokraina ho an'ny Nyurrangu Ngardji , sarintany mitovy amin'io mampiseho ireo fiteny ao Queensland.
Nangonina avy amin'ireo “Tantara Velon'ny Fiteny ” ireo fandraisan'anjara lehibe, izay mpiteny ny fitenin'ny teratany sy ny mponin'ny Nosy ao amin'ny helodranon'i Torrès miasa ho toy ny mpiaro ny eo an-toerana. Nanolotra lahatsary fijoroana vavolombelona manipika ny maha-zava-dehibe ny fitazonana sy famelonana ny fiteny ho an'ny taranaka ankehitriny sy ho avy ireo olona ireo. Ireny fandraisana anjara ireny dia fomba lafatra ho an'ireny mpitarika eny an-toerana ireny mba hampidirana ny tenany amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo ihany ho toy ny olona vonona ho amin'ny fampiroboroboana ny fiteny ka azo antsoina hakàna torohevitra sy fanohanana momba ny fiteny.
Nantitranterina manokana tamin'ny alàlan'ireny lahatsary fijoroana vavolombelona ireny ny fomba nisafidianan'ireo vondrom-piarahamonin'ny fiteny ho ny vondron'izy ireo ihany no hisolo tena azy, ​​sy ny hanamarinany ny toerana sy ny tsipelin'ny teny ampiasainy mba hiantsoana ny fiteniny. Araka an'i Melinda Holden  avy amin'ny Fiteny Voalohany Aostralia, io endri-javatra io dia tena manandanja satria ny fiteny Aostraliana dia voalohany indrindra teny notenenina talohan'ny fiorenam-ponenana, ary:
ireo misionera, ny manampahefana, ny manampahaizana manokana amin'ny teny sy ireo hafa mpikaroka izay niaraka niasa tamin'ny vondrom-piarahamonin'ny teny, sy ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina rahateo ihany koa dia niantso / nanonona azy ireny taminà fomba maro samy hafa nandritry ny taona maro.
Mametraka indray izay fahaizana manapaka hevitra izay ho eo an-tànan'ireo mpikambana amin'ny vondrom-piarahamonina mba hanapaka hevitra ho azy ireo momba izay fomba hanehoany azy ity sarintany ity.
“Tantara Velon'ny Teny” iray hafa no aseho ao anatin'ilay sarintany, Bridget, mpiteny ny fiteny Warrgamay  nanoratra toy izao:
Djambi aho amin'ny fiteninay. Antibavy no dikan'izany. Mpikirakira ny teny aho, aleoko mampiasa ny voambolana mpikirakira ny tenin'ny vondrom-piarahamonina na mpikirakira ireo fiteny voalohany. Mandika ireo loharano avy amin'ny teny Anglisy ho amin'ny fiteninay aho, ary mijery izay fitaovana ilainay mba hanohanana ny fianarana tenim-pirenena. Miasa betsaka miaraka amin'ny vondrom-piarahamoninay aho. Zavatra betsaka no ataonay, resahanay sy iarahanay manaiky miaraka amin'ny vahoakanay momba ny fomba hanohanana ny fiteny.
Iainako izany ary rivotra iainako isanandro. Ny zavatra tsara indrindra azoko atao dia ny asa ho an'ny Teny. Iza no te-hivoaka ary hanao zavatra hafa, rehefa afaka mamonjy ny teninay aho?
Misy fomba hafa vokarina miaraka amin'ireo “Tantara Velon'ny Fiteny” sy ireo invontoerana isam-paritra ho an'ny fiteny hatolotra ho an'ireo vondrom-piarahamonina Teratany sy ireo ao amin'ny Nosy ao amin'ny helodranon'i Torrès mba handraisany anjara ao amin'ny Gambay ary hifehezany ny fomba anehoana ny kolontsain'izy ireo sy ny fiteniny ao amin'ny aterineto. Ny votoaty aseho ankehitriny ao amin'ilay sarintany dia mety ho ampiasaina any am-pianarana amin'ny alalan'ireo taranja manandanja ahitàna ny teny Anglisy, Matematika, Siansa, Tantara, Jeografia sy ny fahaizamiaina. Mifandray amin'ny fandaharam-pampianaram-pirenena Aostraliana ilay fanamarihana omeny ary mandrakotra ny ambaratongam-pianarana isantaona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/02/01/95050/
 teny Butchulla: http://www.slq.qld.gov.au/resources/atsi/languages/word-lists/body-parts/butchulla-language
 loharano maroloko anaty sarintany: https://gambay.com.au/
 Mpanolotsain'ny Komitin'ireo fitenin'ny teratany ao Queensland: http://www.qilac.org.au/
 Tantara Velon'ny Fiteny: https://gambay.com.au/profiles
 fiteny Warrgamay: https://en.wikipedia.org/wiki/Warrgamay_language